माटोको भाँडामा पानी किन चिसो हुन्छ ? ~ विज्ञान संसार
माटोको भाँडामा पानी किन चिसो हुन्छ ?
Posted by Om Bhandari On 4:39 AM
तपाइँले याद गर्नुभएको होला, माटोले बनेको भाँडोमा राखिएको पानी अरु भाँडोमा राखिएको पानीभन्दा चिसो हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ त - माटोको भाँडोमा लाखौं अदृश्य प्वालहरु हुन्छन् । नाङ्गो आँखाले देख्न नसक्ने यस्ता प्वालहरुबाट भाँडोभित्र रहेको पानी स - साना कणहरुको रुपमा बाहिर निस्कन्छ । जब ती पानीका कणहरु बाहिर निस्कन्छन् , बाहिरी हावाको सर्म्पर्कमा आएर बाफ बन्न थाल्छन् । यो प्रक्रियामा वाष्पीकरणका लागि आश्यक उष्णता पानीका कणहरुले माटोको भाँडाभित्र रहेको पानीबाट प्राप्त गर्छ र पानीलाई चिसो राख्दछ ।
लामखुट्टेले रगत किन पिउँछ ?
प्रकाश एक तरंग : वेग, गति समय व अवधि
चिसोमा छालामा काँडा किन उम्रन्छ ?
पुरानो हुँदै गएपछि घरको काठ किन कालो हुन्छ ?
मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ ?
घामबाट अचानक अँध्यारोमा आउँदा आँखा राम्रो सँग देख्...
ओंठ किन फुट्छ ?
आगो किन सधै माथितर्फ फर्कन्छ ?